26 มี.ค. 2563 - 15:37 น.
အခြေခံစားကုန်တွေကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထားနဲ့ ရောင်းချပေးမယ်
ဆန်၊ဆီ အပါအဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထားနဲ့ အခြေခံအလုပ်သမား အများစုတည်ရှိရာ စက်မှုဇုန်တွေအနီးမှာ မတ် ၂၆ ရက်နေ့ကစပြီး ရောင်းချပေးသွားမယ် လို့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်( UMFCCI)က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မတ် ၂၆ ရက်နေ့မှာ ညနေပိုင်းမှာ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးရှေ့မှာ အခြေခံ စားသောက်ကုန်တွေကို သက်သာသောနှုန်းထားနဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်သူ တွေကိုရောင်းချ ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
' ' အသက်သာဆုံးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာပါ။ ရောင်းချပေးမယ့်ပမာဏက အဲဒီစက်မှုဇုန်တွေမှာရှိတဲ့ လုပ်သားအရေအတွက်ကို မူတည်ပြီးရောင်းပေးသွားမယ်'' လို့ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်၊ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒီလို အခြေခံလုပ်သားတွေရှိရာ နေရာတွေမှာ လိုက်လံရောင်းချပေးတာကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နဲ့ ညီ နောင်အသင်း တွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါး အသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆီကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် -၁၉ လူနာတွေ့ရှိပြီးနောက် ရုတ်တရက် အခြေခံစားကုန်တွေကို အလုအယက်ဝယ်ယူစုဆောင်းတာ တွေရှိလာသလို လက်လီဈေးကွက်မှာ ဆန်၊ဆီစတဲ့အခြေခံစားကုန် တွေလည်း ဈေးအနည်းငယ်မြှင့်တက်တာတွေလည်း ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်အပြင် အခြားစက်မှုဇုန်တွေတည်ရှိရာ မြို့နယ်တွေကိုလည်း လာမယ့်ရက်တွေအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဆက်လက်လှည့်လည်ရောင်းချ ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါ တယ်။
'' နောက်ထပ်နေရာတွေတော့ ထပ်ပြီးရောင်းချပေးဖို့ရှိတယ်။ ဘယ်နေရာတွေလည်းဆိုတာတော့ လောလောဆယ်အတိအကျတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး''လို့ အဆိုပါပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ဆက်လက် ပြောပြပါတယ်။
အခုလို အခြေခံစားကုန်တွေကို သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လိုက်လံရောင်းချပေးတာဟာ ကိုဗစ် -၁၉ ကြောင့် အများပြည်သူဝယ်ယူစားသုံးနေတဲ့ အခြေခံစားကုန်တွေ ဈေးကွက်အတွင်း ပြတ်လပ်မှုမရှိစေဖို့နဲ့ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာမျိုးတွေမရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဆန်၊ဆီစတဲ့အခြေခံစားကုန်တွေကိုအသက်သာဆုံးနှုန်းထားနဲ့ အခြေခံအလုပ်သမားတွေရှိရာစက်မှုဇုန်တွေအနီးမှာရောင်းချပေးမယ်